Jereo ny fironana amin'ny makiazy sahy amin'ny fahavaratra | Bezzia
Fironana amin'ny fanaovana makiazy sahy amin'ity fahavaratra ity
ny Ny fironana makiazy dia samy hafa be ankehitriny, izay tsara, satria ny tsirairay amintsika dia samy manana ny tsirony mifanentana amin'ny fombantsika. Izany no antony ahafahantsika mahita avy amin'ny makiazy voajanahary ka hatrany amin'ny olona mahonon-tena mifantoka amin'ny tonta miboridana, makiazy mahazatra na amin'ny lafiny iray hafa ny fironana amin'ny fanaovana makiazy sahy amin'ity fahavaratra ity.
Miaraka amin'ny makiazy sahy, ny zandriny indrindra dia miroso amin'ny famoahana azy, saingy tsy isalasalana fa misy hevitra izay azontsika rehetra atao mifanaraka amin'ny iray andro ny fiainantsika. Tena mahaliana ireo fironana ireo satria mahatonga antsika handao ny faritra mampionona antsika amin'ny resaka makiazy, fa ny olona tsirairay dia afaka mampifanaraka azy ireo amin'ny alàlan'ny fitadiavana tonony na hevitra tiany.
1 Volomaso boribory
2 Eyeshadows miloko feno
3 Eyeliner mampatahotra
4 Molotra mafy
5 Miverina i Glitter
6 Aloka metaly
Ny volomaso dia teboka iray tena lehibe eo amin'ny tarehintsika tato ho ato. Tsy eo intsony ny volomaso main'ireo taona sivifolo manome lalana hafa voaisy marika sy voajanahary, miaraka amina toetra marobe. Fa ny fironana eo amin'ny volomaso koa dia miova tsikelikely. Amin'izao fotoana izao dia afaka mahita fironana lehibe hafa isika, dia ilay volomaso nikatona, satria zavatra manaitra izany. Ity karazana volomaso boribory ity dia tsy mahasarika ny rehetra, fa azo antoka fa zavatra tena miavaka izy ireo. Mba hanaovana azy ireo dia mila borosy fikandrana sy volomaso hitazonana azy ireo ho toy izany. Atambatra miakatra izy ireo ary matevina ihany koa. Raha somary manify ny anao dia ampiasao pensilihazo koa hamenoana azy ireo.
Eyeshadows miloko feno
ny samy hafa be ny eyeshadows ary io no ahafahantsika milalao indrindra miaraka amin'ny makiazy. Amin'ity taona ity, samy maka ny miboridana na ny sahisahy hafa. Misy ireo mampiasa alokaloka toy ny neon mavokely, volomboasary na mavo. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fahatongavan'ny fahavaratra, dia misy feo sahisahy sy maivana kokoa ampiasaina, koa io no fotoana mety hampiasana azy ireo. Misy karazan-dahatsoratra rehetra ao anaty eyeshadow hanandramana, na dia ny endrika mampamirapiratra na mamirapiratra aza.
Fironana iray hafa izay hitantsika tamin'ity taona ity ny eyeliner manaitra, entina mankamin'ny farany ary ampiasaina hanasongadinana bebe kokoa ny maso. Ny fampiasana eyeliner dia tsy mora ary fantatsika izany, noho izany dia zava-dehibe ny fanazaran-tena aloha raha te hanao ny iray amin'ireo vokany ireo isika, satria raha tsy manana pulsa tsara isika dia mety hitera-doza ny vokany. Fa raha tianao ny eyeliner hatrizay dia azonao atao ny manatevin-daharana an'io fironana vaovao io.
Ny maso amin'ny feo mahery dia entina, fa ny molotra ary na ny roa miaraka aza raha tianao ilay fomba manaitra. Ny molotra neon indray no fironana fa eny mila loko mahery ianao, manana loko mena sy haran-dranomasina ary volomboasary. Azonao atao koa ny mampifangaro loko roa mitovy loko, mavokely mavokely ary matevina kokoa mba hamoronana vokatra gradient tena izy.
Miverina i Glitter
Aorian'ny fitanana dia miverina ny zavatra sahy, ka tonga ny fotoana hankafizana makiazy sy filalaovana azy. Ny vita vita amin'ny glitter dia miverina amin'ny lamaody na amin'ny fampiasana isan'andro aza. Manomboka amin'ny masomaso manjelanjelatra ka hatramin'ny molotra miaraka amina glitter. Mety ho vokany tsotsotra izany, tsy misy famirapiratana be loatra, nefa miaraka amin'izay fikitika manokana izay hampiavaka ny makiazy anao.
ny ny alokaloka metaly dia mety ho fironana hafa ny fotoana. Raha tsy mila glitter ianao dia azonao atao ny manasongadina an'io faritra io amin'ny famaranana metaly izay misy famirapiratany ihany koa. Misy alokaloka metaly maro izay mihatra mora foana ary azo antoka fa manintona ny saina. Mba hampiavaka azy ireo dia azo afangaro amin'ny molotra miboridana tsotra izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fironana amin'ny fanaovana makiazy sahy amin'ity fahavaratra ity
Inona no atao hoe fitiavana mitambatra?
Akanjo 9 misy efamira Vichy hamoronana akanjo lamaody